Guardiola oo xiiseenaya inuu lasoo saxiixdo xidig ka tirsan Real Madrid qiimo kasta uu kaga fadhiyo suuqa kala iibsiga – Gool FM
Guardiola oo xiiseenaya inuu lasoo saxiixdo xidig ka tirsan Real Madrid qiimo kasta uu kaga fadhiyo suuqa kala iibsiga
(Man City) 19 Maajo 2018. Macalinka kooxda Man City ee Pep Guardiola ayaa markale doonaya inuu dib ugu laabto suuqa kala iibsiga, wuxuuna markan doonayaa in xidig muhiim ah uu kala soo saxiixdo Real Madrid.
Pep Guardiola ayaa lagu soo waramayaa inuu qorsheenayo in Los Blancos uu kala soo saxiixdo Toni Kroos suuqa xagaaga ee soo aadan. Si uu ugu xoojisto khadkiisa dhexe.
Toni Kroos ayaa ah bar-tilmaameedka koowaad ee macalinka reer Spain oo aaminsan in hadii uu sameeyo saxiixiisa ay Sky Blues ka dhigi doonto mid ka awood badan sida ay haatan tahay.
Sida ay wararku xaqiijinayaan Guardiola oo lala xiriirinayay Isco ayaa lagu soo waramayaa inuu isaga haray raacdadii uu ugu jiray saxiixiisa sababa la xiriira hoos u dhac ku yimid qaab ciyaareedkiisa kulamadii lasoo dhaafay.
Sidaas dated Pep Guardiola ayaa markan xiiseenaya in uu gacanta kusoo dhigo saxiixa Toni Kroos, qiimo kasta ee kaga baxa suuqa xagaaga ee soo aadan.
Taageerayaasha Juventus oo Ooyin ku macsalaameeyay Gianluigi Buffon +SAWIRRO
Atletico Madrid oo diyaarsatay qorsho cusub ay kaga hor istaageyso Griezmann inuu u dhaqaaqo Barcelona